Google Maps na-agbakwunye ntọala maka nnweta na ebe | Gam akporosis
Google Maps webotere onodu ohuru nke na egosiputa ebe enwere ike inweta site na oche ndi nwere oche
Ọ bụrụ na e nwere ihe Google na-akụ nzọ, ọ bụ na-enye ndị nwere obere ikike ije ozi zuru ezu. Ọ bụ mgbakwunye ọhụrụ na Google Maps ma ọ na-etinye ọnọdụ ọhụrụ nke gosipụtara ebe ndị enwere ike ịnweta site na oche nkwagharị.
Ọ bụghị naanị ngwa Google ka eji maka ndị nwere ụdị nsogbu anụ ahụ. Maapụ ọrụ zuru oke abaghị uru ma ọ bụrụ na ọ gosipụtaghị ebe ndị ahụ dabara adaba maka ndị ahụ na-aga n'oche nkwagharị.
Anyị nwere ike iche n’echiche ọnọdụ ahụ ebe mmadụ na-ezube ịga otu ebe dị n’obodo ọhụrụ ma ọ gaghị eleba anya na nnweta ndị ahụ si ebe a na-adọba ụgbọala gaa na họtel. Ọ bụ ebe a ka ọnọdụ ọhụrụ batara nke Google Maps iji nye ozi ahu bara uru.
Ugbu a ndị ọrụ ga-ahụ ntọala nnweta ọhụrụ na ntọala nke Google Maps. Nke a nwere ike ịrụ ọrụ ebe ndị mmadụ nwere ike ịbanye na ndị chọrọ agagharị agagharị iji nweta ohere ọ bụla.
N'oge nkenye ọnọdụ ọrụ ọhụrụ a bụ na-eru Australia, Japan, United Kingdom na United States, ọ bụ ezie na ọ ga-erute ọtụtụ mba site n'oge ruo n'oge. Ọ ga-abụ akara ngosi nke oche nkwagharị na-apụta na nsonaazụ ọchụchọ ahụ, ebe nkọwa ndị ọzọ dịka ebe a na-adọba ụgbọala, ụzọ mbata, ụlọ mbuli elu ma ọ bụ ebe ezumike ga-apụta na ha.
N'ezie otu ọrụ ha nwere ike itinye ozi a site na ntuziaka mpaghara. Google enyela ndu maka ndi choro iji onodu ohuru a nke na-enye ihe omuma bara uru maka ndu ubochi nke ndi na-eji oche ndi ngwọrọ. Otu eziokwu na ọtụtụ mgbe ha na-echefu banyere nsogbu ịnweta nke ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere; ee o tinyela batrị ndị ahụ gosi ụlọ ọrụ na nnyefe ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Maps webotere onodu ohuru nke na egosiputa ebe enwere ike inweta site na oche ndi nwere oche
Enwere ike iji Google Duo rụọ ọrụ ugbu a na-enyeghị nọmba ekwentị gị
Nke a bụ ihe Galaxy Note 20 nwere ike ịdị